Wararka - Tallaalka wadajirka ah: Cirbadaha 'Baaba'aya' iyo warar kale oo xan ah ayaa laga hadlay
Soo saarista tallaalada Covid-19 ee Boqortooyada Midowday iyo Ingiriiska toddobaadkan waxay horseed u noqotay sheegashooyin cusub oo been abuur ah oo ku saabsan tallaallada. Waxaan eegnay qaar ka mid ah kuwa ugu ballaaran ee la wadaago.
Muuqaalada BBC News ayaa loo sii gudbinayaa "caddeyn" baraha bulshada in tallaalada Covid-19 ay been abuur yihiin, iyo in munaasabadaha saxaafadda ee muujinaya dadka la durayo la dhigay.
Muuqaalka, oo laga soo xigtay warbixin ka baxday TV-ga BBC toddobaadkan, waxaa wadaagaya dadka u ololeeya ka hortagga tallaalka. Waxay ku andacoonayaan irbado been abuur ah oo "cirbado sii libdhay" loo adeegsanayo isku day ay masuuliyiintu ku doonayaan inay ku dhiirrigeliyaan tallaal aan jirin.
Hal nooc oo lagu soo daabacay Twitter-ka ayaa in ka badan 20,000 oo retweets iyo like ah, iyo nus milyan aragtiyo. Fidiyaha kale ee faafiye weyn ee fiidiyowga waa la hakiyay.
Fariimaha ayaa adeegsanaya muuqaallo dhab ah oo muujinaya xirfadlayaal daryeel caafimaad oo isticmaalaya siriinjyo nabdoon, oo irbadda ay dib ugulaabaneyso jirka qalabka kadib isticmaalkiisa.
Cirbadaha nabdoonaanta ayaa si aad ah loo isticmaali jiray in ka badan toban sano. Waxay ka ilaaliyaan shaqaalaha caafimaadka iyo bukaannada dhaawacyada iyo infekshinka.
Maaha markii ugu horreysay ee sheegashooyinka irbado been abuur ah ay soo baxaan tan iyo markii tallaalku bilaabmay.
Mid ayaa muujisay siyaasi reer Australiya ah oo sirinjeer ku sawiraya gacanta, irbadda oo si cad loogu daboolay daboolka badbaadada, iyada oo lagu andacoonayo in tallaalkeeda Covid-19 la been abuuray.
Laakiin xaqiiqda, waxay muujisay ra'iisul wasaaraha Queensland Annastacia Palaszczuk inay u muuqato kamaradaha ka dib markii ay heshay tallaalka hargabka bishii Abriil. Fiidiyowgu wuxuu lahaa ku dhowaad 400,000 oo muuqaal ah oo ku saabsan Twitter.
Sawir qaadayaashu waxay codsadeen sawiro dheeri ah maxaa yeelay duritaanka dhabta ah si dhaqso leh ayuu u dhacay.
Ma jiro kalkaaliye caafimaad oo ku dhintay Alabama
Maamulka Caafimaadka Dadweynaha ee Alabama ayaa sii daayay bayaan ay ku cambaareynayaan "war qaldan" kadib sheeko been abuur ah oo ahayd in kalkaaliye caafimaad ay dhimatay ka dib markii ay qaadatay tallaalka coronavirus ee lagu faafiyey Facebook.
Gobolku wuxuu hadda bilaabay inuu ku mudayo muwaaddiniintiisii ​​ugu horreysay tallaalka.
Ka dib markii lagu wargeliyay wararka xanta ah, waaxda caafimaadka bulshada waxay la xiriirtay dhammaan isbitaalada tallaalka bixiya ee gobolka waxayna “xaqiijisay in aysan jirin wax dhimasha ah ee dadka qaata tallaalka. Qoraalladu waa kuwo aan run ahayn. ”
BBC mas'uul kama aha waxyaabaha ku jira boggaga dibedda.Ka eeg tweet-ka asalka ah Twitter
Sheekada ayaa ku soo baxday qoraallo Facebook ah oo sheegaya in mid ka mid ah kalkaaliyeyaasha caafimaad ee ugu horreeyay - haweeney ku jirta 40s - ay heshay tallaalka Covid ee Alabama, ayaa la helay iyada oo meyd ah. Laakiin ma jiraan wax caddayn ah inay taasi dhacday.
Mid ka mid ah isticmaaleyaasha ayaa sheegay inay ku dhacday "eeddadeed eedadeed" oo ay soo dhigtay qoraallo ay ku sheekeysanayso oo ay ku sheegtay inay ku badashay saaxiibkeed.
'Sidee sawirka cagtaydu u noqdeen borobagaando looga hortago tallaalka'
Maya, ma beddeli doonto DNA-gaaga - xanta tallaalka ayaa la shaaciyay
Dhibaatada ay sameysay 'memes' ka hortagga tallaalka
Qaar ka mid ah qoraallada asalka ah ee ku saabsan kalkaalisada hadda kama sii jiraan khadka tooska ah, laakiin shaashadaha shaashadda ayaa wali lala wadaagayaa oo laga faalloonayaa. Mid ka mid ah kuwan ayaa soo jeedinaya in dhacdadu ka dhacday magaalada Tuscaloosa, Alabama.
Isbitaalka magaalada ayaa noo sheegay tallaalkii ugu horreeyay ee loo yaqaan 'Covid tallaal' oo keliya ayaa la bixiyay subaxnimadii 17 Diseembar - ka dib markii tixraaca Tuscaloosa lagu xusay Facebook.
Laga bilaabo 00:30 markay ahayd 18kii Diseembar, Xarumaha Xakamaynta Cudurrada Mareykanka ayaa sheegaya inaysan helin wax warbixin ah oo dhimasho ah meel kasta oo dalka ka mid ah ka dib tallaalka coronavirus.
Qoraallada waxaa lagu calaamadeeyay "been" Facebook-ga laakiin dadka qaarkiis waxay ku andacoodaan iyadoon caddayn loo haynin in "awoodaha hadda jira ay haddaba isku dayayaan inay qariyaan".
Fiidiyowga 'Khubarada' waxaa ku jira sheegasho been abuur ah
Fiidiyow soconaya 30 daqiiqo oo si toos ah u socday sida dadkii ugu horreeyay ee Boqortooyada Midowday ay heleen tallaalka Pfizer Covid-19, waxaa ku jira tiro been abuur ah oo aan caddayn loo haynin oo ku saabsan aafada.
Filimka, oo loogu magac daray "Weydii khubarada", waxaa ku jira ilaa 30 ka-qaybgalayaal oo ka kala yimid dhowr waddan, oo ay ku jiraan UK, US, Belgium iyo Sweden. Covid-19 wuxuu ku tilmaamay mid ka mid ah dadkan inuu yahay "been abuurkii ugu weynaa taariikhda".
Waxay ka bilaabaneysaa sheegashooyinka ah in uusan "jirin cudur dhab ah oo faafa", iyo in tallaalka coronavirus aan la xaqiijin inuu ammaan yahay ama waxtar leeyahay maxaa yeelay "ma uusan helin waqti ku filan".
Labadan sheegashoba waa run.
BBC ayaa qoraal dheer ku saabsan sida tallaal kasta loo oggolaaday si loogu isticmaalo coronavirus-ka waxaa si adag loo tijaabin doonaa badbaadada iyo waxtarka. Waa runtaa tallaalada loo yaqaan 'Covid-19' waxaa lagu soo saaray si xawli ah, laakiin midkoodna talaabooyinka loo baahan yahay si loo hubiyo nabadgelyada lama dhaafin.
Farqiga kaliya ee jira ayaa ah in marxaladaha qaar ay is dulsaarteen sidaas, tusaale ahaan, wajiga seddexaad ee tijaabada - markii tobanaan kun oo qof lasiiyay tallaalka - wuxuu bilaabay halka wajiga labaad, oo ay kujiraan dhowr boqol oo qof, wali uu socdo, " Ayuu yidhi Weriyaha caafimaadka ee BBC Rachel Schraer.
Sideen ku heli karaa talaalka coronavirus?
Ka-qaybgalayaasha kale ee fiidiyowga ee ka muuqda shaashadda waxay ku celiyaan isla sheegashooyinka aan sal lahayn.
Waxaan sidoo kale maqalnaa aragtiyo aan sax ahayn oo ku saabsan tikniyoolajiyadda ka dambeysa tallaalka Pfizer's Covid-19. Taasna, cudurka faafa awgood, warshadaha dawooyinka waxaa loo fasaxay inay "ka boodaan tijaabooyinka xoolaha… annaguna aadanaha waxaan noqon doonnaa doofaarrada guinea."
Tani waa been. Tallaallada Pfizer BioNTech, Moderna iyo Oxford / AstraZeneca dhammaantood waxaa lagu tijaabiyay xayawaanka iyo sidoo kale kumanaan dad ah, ka hor inta aan loo tixgelin liisan bixinta.
Fiidiyowga waxaa lagu dhajiyay barxad martigelinaysa oo u taagan inay bedel u noqoto YouTube-ka, ayay tiri Olga Robinson, khabiir ku takhasustay xogaha ka-socota BBC Monitoring.
"Ballanqaadka dhexdhexaadinta waxyaabaha hooseeya, bogagga sidan oo kale ah ayaa bilihii la soo dhaafay noqday meel lagu tago oo loogu talagalay adeegsadayaashaas inay ka saaraan baraha waaweyn ee warbaahinta bulshada faafinta warar qaldan."